ချက်တင်ကစားတဲ့သင့်ဖုန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
ိုR။ နှင့်မိန်းမ၏အိပ်မက်များ၏။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏စီးတီးရှိပြီးသားအတွေ့သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာမှတဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သင်ပိုကောင်းမယ်။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖွင့်။ ိုR။နှင့်မိန်းမ၏အိပ်မက်များ၏။ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏စီးတီးရှိပြီးသားအတွေ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာမှကျေးဇူးတင်စကား။ မဟုတ်ဘဲ၊လူတိုင်းရှာဖွေနေသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူအဆင်ပြေချောမွေ့။ ဘယ်လိုဆံပင်အရောင်၊အရပ်အမြင့်၊သို့မဟုတ်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်။ ကွာရှင်း။ ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကိုအတွက်အစည်းအဝေးယောက်ျားကနေ ၅၀ မှ ၆၀ အသက်အနှစ်။ များအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှင့်အဆက်အသွယ်၊အတူတကွခရီးသွားလာ၊တစ်မိသားစုမစတင်။.
ချိန်းတွေ့၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ကလေးတစ်ဦး၊Vadara ဦးဆောင်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အင်တာနက်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်ကအရေးလေ့လာဖို့အင်တာနက်ကို၊ဖန်တီးနေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ အားမိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ ရှာဖွေ Vadara တွေ့န်ဆောင်မှုအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်စစ်မှန်သောႏွင့္ထားပါသည်၊ဆက်ဆံရေးကိုအများဆုံးအောင်မြင်စွာအဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ချဲ့ထွင်။ ဒီဆိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏တာဝန်ခံအခမဲ့မည်သူမဆိုအကဲဖြတ်ဖို့။ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး Vadodara အသစ်အဆင့်ဆင့်များအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊အားလုံးအစာရင်းသွင်းန်ဆောင်မှုများဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အခမဲ့။ Pavel။ ၅၀ အသက်အနှစ်။ သာ OLKAS'၊ရှေးကာလကိုရွှင်လန်းရိုးရာ humorously PRISUDSTVUET။ အသက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးလိုသူထွက်ရှာဖို့၊နှင့်လည်းခဲအမျှဝေ။။။။။ Childlessness အတားအဆီးတစ်ခု။ ဤသည်မုန့်။ ဦးစားပေး:ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အကျွမ်းနှင့်အတူမြင့်မားသောအဆင့်၌တည်၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးချစ်စရာစုံတွဲ(အမျိုးသမီး ၃၅-၃၇ အသက်အနှစ်)။ ငါတို့သည်လည်း ၅ နှစ်၏သဟဇာတ။ အစီအစဉ်။ ဤလူငယ်တစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပညာရေးဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့အကျင့်၊သူ intellectually။ အားလုံးနှင့်အတူတွဲ။ ငါသည်လည်းချင်ပါတယ်လိပ်စာအမျိုးသားများအတွက်၊မကောင်းတဲ့အလေ့အထများ၊လေပိုကောင်းလေယခင်စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊နှင့်မိသားစု။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူပုံမှန်လိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ ငါအတူအချိန်ဖြုန်း။ ငါအချိန်ဖြုန်းလိမ့်မည်အတူ၊သင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရ၊အချင်းချင်းသိရန်၊နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကြိုက်နှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားကို)ငါလိုအတူလိုက်ဖက် Vadodara ဗီဒီယိုချက်တင်။ ပေးလုံးချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးချိန်းတွေ့နေကြတယ်လုံးဝအခမဲ့။
အပေါ်အခြေခံငါ ကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပါပြီအရေးအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများဒီဗီဒီယိုမှာ။ အဘို့အကြှနျုပျ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ(ဗမာ)၊ငါ၏လမ်းညွှန်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့သင်တန်းများ။ ချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများတွင်အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာပိုကောင်းသင့်ပရိုဖိုင်းကိုအတူကောင်းသောအဓာတ်ပုံများ:တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံတစ်ဦးအပြည့်အဝ-ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပုံ၊နှင့်တဲ့ဓာတ်ပုံသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏။ အီတလီကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များ:ကိုဆင်းကျဉ်းမြောင်းရှာဖွေရေး၊အလွန်အကျွံမခြင်း၊နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေခံသောအမျိုးသမီးသင့်ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များအတွက်ဗမာလျစ်လျူရှု၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကဲ့သို့ကစားတဲ့ရက္မ်ား၊ကစားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်များ၊ဓာတ်ပုံများ၊မွတ္ခ်က္မ်ား၊နမ်းသောအခါသို့မဟုတ်ဖိုင်ပေးပို့ရန်။ အသာစား၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်အရေးအမျိုးသမီး။ အကြံပြုချက်အဘို့အအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စောင့်ရှောက်တုန့်ပြန်ပြတင်းပေါက်ကဲ့သို့ရေတို။ ပါကသင်၏ပရောဖက်ရေး၊ငါရေးမယ်။ သင်လိုအပ်အချိုးအတူတူပြန်ရ။ များအတွက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့:ငါ့ကိုမျက်နှာသာပေးလုပ်ပါ၊သင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ထက်က"မင်္ဂလာပါ၊နေကောင်းလား"၊"ကောင်းတဲ့ပရိုဖိုင်း"၊သို့မဟုတ်"ကြီးမား"အၿသည့်အခါသင်ပထမဦးဆုံးစာသားခင္ဗ်ာ။ ပရောပိုပြီးပိုကောင်း။ အစည်းအဝေးရောစိတ်ပညာ-ပရောနှင့်အတူဝှကျထားကင္မရာ၊တကၠရော။
မှတ်ပုံတင်မပါဘဲ Salekhard ချိန်းတွေ့၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။
Teití te tangata hoki i nui te whanaungatanga i
ချိန်းတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ လိင်နိဒါန်းဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြော